Maitiro Ekuyerera kweWiricheya Cushion
hwiricheya zvigaro zvechigaro zvinowanikwa nemutemo wechiremba kana pasherufu uye zvinogadzirwa kubva kwakasiyana-siyana senge furo, gel, urethane zinga reuchi kana makamuri akazara nemhepo. Kudzika, kuomarara uye chimiro chekushingi zvinoenderana nezvaunoda. Iko kushushikana kunogadzirwa nekugara pasi kwenguva yakareba kunogona kupaza maganda uye zvichizounza matambudziko senge maronda ekudzvinyirira. A hwiricheya pad inogona kudzikisira kuzhinji kwekushushikana uku uye nekubatsira nekumira kwakanaka. Kuyera mumwe munhu a hwiricheya pamutsago zvinoenderana kana iri chinotsiviwa pamutsago kana kana muto unotengwa wakazvimiririra kubva kuchitsva hwiricheya.
Kuyera kwe chinotsiviwa pamutsago
1. Verenga chikamu chemukati che hwiricheya nzvimbo yekugara in inches. Usaite kuyera pakati pe hwiricheya maoko. Measure panzvimbo pacho chikamu chechigaro pakati peruoko chasara. 2. Verenga urefu hwe hwiricheya nzvimbo yekugara in inches kubva kuseri kwechigaro kusvika pamberi pechigaro. 3. Ratidza kudzika kwakakodzera kunodiwa kune hwiricheya pamutsago maererano nezvako zvekumanikidza-kuburitsa zvinoda. Chinja ukobvu hwechigaro chako pamwe chete nezvitsiko zvetsoka zvinoenderana nekudzika kwemukosheni kana uchinge wakatsimbirirwa. Zvizhinji mavhiripu zvinogadziriswa.
Kuyera kweCushion Nyowani
1. Pimha pakati penzvimbo yakafara kwazvo yehudyu kana zvidya pawakagara. Gara pasi pane yekuyeresa tepi uchiyera munhu asingakwanise kukubatsira neiri basa. 2. Wedzera pa 1 inch kusvika paupamhi dhayamendi kuti ugone kufamba. 3. Taura chiyero chechigaro nekuyera kubva kumashure kwemagaro ako kusvika kumashure kwemabvi ako pawakagara pasi. 4. Bvisa masendimita kubva pakukora paunenge uine bhuku remagetsi kana simba remagetsi hwiricheya. Kana iwe ukaronga kushandisa makumbo ako kutenderera iyo hwiricheya, tora 2 inches kubva padanho rino kuitira kuti mhuru dzako dzisasve kuzorwa ne chigaro pamutsago nekufamba kwese.
Wiricheya Simudza Zviyero
Nyowani Karma Wiricheya
Lightweight inotakurika Wiricheya Ramps